Sawirro:- Kulan Xasaasi Ah Oo Garoonka Kismaayo Uga Socda James Swan Iyo Odayaasha Jubbaland – GEELLE MAG
Home » Faallooyin Sawiro Wararka
Sawirro:- Kulan Xasaasi Ah Oo Garoonka Kismaayo Uga Socda James Swan Iyo Odayaasha Jubbaland
Abdiqani Posted On August 15, 2019
Magaalada Kismaayo waxaa goor dhow gaaray wakiilka QM u qaabilsan arrimaha Somalia James Swan waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo uu kulan shir waynaha odayaasha dhaqanka ee maamulkaas.
Kulankaan oo ah mid xasaasi ah ayaa Garoonka Diyaaradaha gaar ahaan Koonteenar ku dhex yaalla halkaas waxaa kulan albaabadu ay u xiranyihiin ku leh wakiilka QM James Swan iyo Odayaasha dhaqanka saxda ah ee maamulka Jubbaland iyada oo ammaanka si weyn loo adkeeyay.
Intiisa badan kulanka waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka iyo sida ay ugu qabsoomi karaan si xor iyo xalaal ah iyaga oo odayaashu ay qaadanayaan kaalintooda kaga aaddan.
Kulankaan ayaa noqonaya mid ka mid ah kulamadii ugu xasaasisanaa ee ka dhaca magaalada Kismaayo iyada oo aysan ka qeyb gelayn Siyaasiyiinta u taagan madaxtinimada maamulkaas iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
Dhinaca kalana marka uu soo dhamaado kulankaan ayaa la filayaa in wakiilka QM ee arrimaha Somalia James Swan in uu si gaar ah ula kulmo Madaxweynaha maamulka Jubbaland musharaxiinta iyo guddiga doorashooyinka isla markaana uu ku qanciyo in si hufnaan a loo maamulo doorashada kaalintoodana laga siiyo Musharaxiinta.
Cabdiqani Garaad kala xidhiidh Cabdiqani halkan: Abdiqani1446@gmail.com ama bartiisa twitterka